वर्षा अर्थात् रमाइलो मौसम - जीवन शैली - प्रकाशितः श्रावण ९, २०७३ - नारी
वर्षा अर्थात् रमाइलो मौसम
तस्विर: नवराज वाग्ले
श्रावण ९, २०७३
वैशाख–जेठको प्रचण्ड गर्मीपछि आउने झरीले जीवनमा एक किसिमको उमङ्ग ल्याउँछ । गर्मीमा सबैले वर्षाको मौसम सम्झिरहेका हुन्छन् । गर्मीबाट आहत भएकाहरू तथा खेती–किसानी गर्नेहरूका लागि वर्षा प्रकृतिको वरदान नै हो तसर्थ वर्षाको आगमनसँगै सबैमा एक प्रकारको हर्ष छाउँछ । जब आकाश मडारिएर पानी पर्न थाल्छ, त्यसले प्रदान गर्ने शीतलता प्राणीवर्गका लागि सुखदायी हुन्छ । वर्षाका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । वर्षामा दूषित पानीका कारण पखाला, आउँ तथा हैजाजस्ता रोग लाग्नसक्छन् । पानीको संसगर्मा आएर लामखुट्टे, भुसुनाजस्ता हानिकारक कीराहरू मौलाउँछन् जसले गर्दा रोग फैलने सम्भावना हुन्छ । कमजोर स्वास्थ्य भएकाहरूले यो मौसममा विशेष सजग हुनुपर्छ । विशेषगरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूले सावधानी अपनाउनुपर्छ । स्वास्थ्यप्रति सजग रहने हो भने यो मौसमको पर्याप्त मज्जा लिन सकिन्छ ।
चाहना भएर वा नभएर मानिसहरू वर्षामा भिज्छन् । बालबालिकाहरू स्कुल जाँदा–फर्कदा, ठूला मानिसहरू अफिस जाँदा फर्कदा भिज्न सक्छन् । आकाशको पानी स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो तथा उपयुक्त मानिँदैन । वर्षाको पानीले ज्वरो आउने तथा केश झर्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट जोगिन पानीमा भिज्नेबित्तिकै शरीर सुकाउनुपर्छ । केही गरी पानीमा भिजे तुरुन्तै नुहाउनुपर्छ ।
–भिजेको कपडा तुरुन्तै फुकाल्नुपर्छ । यसमा विभिन्न जीवाणु पैदा हुनसक्छन् । फोहोर तथा चिसो कपडाले चाँडै रोगी बनाउँछ । यो मौसममा सफा कपडा लगाउनुपर्छ ।
–वर्षामा सकेसम्म चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा खानुहुँदैन । नुनिलो बढी खानाले ग्यास्ट्रिक बढ्नसक्छ । फ्राई गरिएका खानेकुरा पनि सेवन गर्नु हुँदैन ।
–यो मौसममा सकेसम्म हरियो तरकारी सेवन गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा भिटामिन तथा खनिज प्रसार गर्छ र संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ ।
–यो मौसममा ओटजस्ता सुख्खा कुरा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले शरीरलाई भिटामिन प्रदान गर्छ ।
–पेटसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्न सक्ने भएकाले यो समयमा तेल कम भएका खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म उसिनेका खानेकुरा सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
–खाना तयार गर्दा अदुवा, लसुन, जिरा, धनियाँ आदि मसला प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता मसलाले जीवाणुविरुद्ध लड्न सहयोग गर्छन् ।
–वर्षामा मह सेवन गर्नुपर्छ । यसले खाना पचाउन सहयोग गर्नुका साथै सानो आन्द्रा बलियो बनाउँछ ।
–वर्षामा तातो पेयपदार्थ सेवन गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले उपयोगी मानिन्छ । कफी–चिया तथा मिन्ट विथ तातोपानीले शरीरलाई आराम दिन्छ ।
मंसिर २, २०७३ - नायिका वर्षा राउत एवं संजोग कोइराला
श्रावण ३, २०७३ - साउन मेहन्दीको मौसम हो
श्रावण २, २०७३ - वर्षा स्वास्थ्य
असार ३०, २०७३ - वर्षायाममा वर्षा
थप केही जीवन शैलीबाट
जन्मान्तर कति र किन ? मंसिर ७, २०७८
सुवर्णको फिटनेस मन्त्र माघ ६, २०७७
कस्तो हुनुपर्छ वर्षातको खाना ? असार ११, २०७७
यी खानेकुरा खानुस्, तनाव घटाउनुस् असार ३, २०७७
स्क्रिन अघि धेरै समय बस्नु घातक, जोगिने कसरी ? जेष्ठ ११, २०७७
बन्दाबन्दीले बढ्दो मानसिक समस्या र समाधान जेष्ठ ८, २०७७